Mipetraka any an-dafy - Dinika forum.serasera.org
Mipetraka any an-dafy
Fitohizan'ny hafatra : Mipetraka any an-dafy
Charoumeni - 26/07/2017 16:21
Taona vitsivitsy lasa izay nianatra tany ivelany aho. Naniry ny hipetraka tany aho saingy tsy nahita lalana ary anisan'ny fepetra notakiana ny fiverenana aty an-tanindrazana raha vao vita ny fianarana. Mba te hanontany anareo diaspora aho hoe tena sarotra tokoa ve ny fahitana lalana ipetrahana any an-dafy sa izaho no tsy nahay nitsikaraka?
Misaotra izay mamaly
rhaj0 - 26/07/2017 23:01
Matetika ny fananon'ny gasy dia rahefa mbola mianatra iny no efa mitilitily, na mamboatra ny papier (immigration), na mitady asa (visa de travail fa tsy immigration), na mikisaka any @ firenena hafa (Australie sy Canada ireny dia terre d'immigration)
Ilay mitady asa indray, dia raha ny aty Kanada aloha, dia ... feno ny tolotra ho an'ny rehetra (na mpiavy na tompon-tany) eraky ny internet, fa ny olana ho an'ny rehetra (na mpiavy na tompon-tany) dia mitady ilay "experience canadienne" ry lerony.
Dia eo izany ilay miverina @ itsy ambony. Rahefa mbola mianatra iny, dia ... mamboly "experience canadienne". Fa raha tsy misy moa io, dia vonona izany ny manao an'io, na dia tsy @ ilay tena tianao na tena fahaizanao no misy eo eee...
hery - 29/07/2017 09:11
Tamin'ny fotoana nianatra no tena tokony nitady hevitra an.
Fa azo atao koa ny manohy mianatra kely. Ohatra hoe misoratra anarana amin'ilay oniversité teo aloha ihany fa manao fandalinana bebe kokoa. Dia sady mitady asa amin'izay.